फुटबल विश्वकप २०१४ को समूह चरणमा के के भयो त ? - Himalayan Kangaroo
फुटबल विश्वकप २०१४ को समूह चरणमा के के भयो त ?
Posted by Himalayan Kangaroo | १३ असार २०७१, शुक्रबार १९:५२ |
फिफा विश्वकप २०१४ को समूह चरणका सम्पूर्ण खेलहरू सकिएका छन् । समूह चरणमा धेरै उतार चढावहरू भए । केहि राम्रा मानिएका देश दोश्रो चरणमै पुग्न सकेनन् भने केहि कमजोर आँकिएकाले दोश्रो चरणमा आफ्नो स्थfन सुरक्षित राखे । नाम चलेका केहि खेलाडिले उत्कृष्ट प्रदर्हन गरे भने केहि खेलाडि फिक्का देखिए ।
पूर्व विश्कप विजेता स्पेनले समूह चरणका दुर्इ खेलमा लगातार हार बेहोर्दै प्रतियोगिता बाट बाहिरियो । त्यस्तै २००६ को विश्वकप विजेता इटालीले पनि समूह चरण पार गर्न सकेन । प्रतियोगिताको प्री-क्वाटर फाइनल सम्म पुग्न इंगल्याण्ड, पोर्चुगलपनि सकेनन् ।
नेदरल्याण्ड्स, कोलम्बिया, अर्जेन्टिना र बेल्जियम समूह चरणका तिन वटै खेल जित्ने सके भने तिनवटै खेल हार्ने देशहरू क्यमरून, अष्ट्रेलिया र होन्डुरस भए । समूह चरणको समाप्ति सम्म कुल ४८ खेलमा भने १३६ गोल भए। जर्मनीका थोमर मुलर, अर्जेन्टिनाका मेस्सि र ब्राजिलका नयमारले सबैभन्दा बढि चार-चार गोल गरेका छन् । त्यस्तै जर्मनीका मिरोस्लाभास क्लोसले घाना विरूद्द गोल गर्दै रोनाल्डोको विश्वकपमा गरेको १५ गोल संग बराबरी गरे ।
यो विश्वकपमा जर्मनीका मुलरले पोर्चुगल विरूद्द र स्विट्जरल्याण्डका शारीकिले होन्डुरस विरूद्दको खेलमा ह्याट्रिक गर्न सफल भए । ४८ खेलमा १२८ वटा पहेंलो कार्ड देखाइयो भने ८ वटा रातो कार्ड । उरूग्वेका फरवार्ड लुइस सुआरेजले इटालीका डिफेन्डर जर्जियो चिएलिनिको काधमा टोकेपछि फिफाले ९ खेलको प्रतिबन्ध, ४ महिना फुटबल गतिविधि गर्न नपाउने र १ लाख १२ हजार डलर जरिवाना लगाएको छ ।
प्री-क्वाटरफाइनलमा भिड्ने देशहरूः
ब्रजिल विरूद्द चिलि,
नेदरल्यण्ड्स विरूद्द मेक्सिको
कोलम्बिया विरूद्द उरूग्वे
कोस्टारिका विरूद्द ग्रिस
फ्रान्स विरूद्द नाइजेरिया
अर्जेन्टिना विरूद्द स्विट्जरल्याण्ड
जर्मनि विरूद्द अल्जेरिया र
वेल्जियम विरूद्द अमेरिका
Previousहेलिकप्टरले पछ्याएपछि प्रशिक्षण रद्व
Nextअसार १४ गतेको एक्सचेञ्ज रेट
मैत्रिपूर्ण खेलमा थाइल्याण्डसँग नेपालको ३ – ३ को बराबरी
१५ भाद्र २०७१, आईतवार १८:०८